Wararkii ugu dambeeyay ee Dagaalka Kismayo
Topnews :-Wararkii ugu dambeeyay ee Dagaalka Kismayo
07 June 2013 Waagacusub.com-Maleeshiyo beeleedyo u dhashay beelaha Mareexaan,Sheekhaal iyo Gaaljecel ayaa ku biiray dagaalka Kismayo iyagoo ka barbar dagaalamaya kuwa taabacsan Madaxweyne Iftiin ee beesha Cawra Male.
Maleeshiyaadka huwanta ayaa la wareegay inta badan gacan ku heynta Kismayo,waxayna Saraakiisha Ciidamadda Kenya sheegeen inuu Magaalada Ka baxay ku xigeenkii Ahmed Madoobe oo lagu magacaabo Fartaag.
Dagaalka labada dhinac ayaa biloowday kadib markii Maleeshiyo taabacsan Ahmed Madoobe weerar ku qaadeen Madaxweyne Iftiin oo ka mida Madaxweyneyaasha tirada badan ee Jubooyinka.
Maleeshiyo beeleed taabacsan Madaxweyne Iftiin ayaa dagaalka xoog u galay,waxayna ila wareedyo muhiima u sheegeen waagacusub inay dileen taliyahii Maleeshiyadda Ahmed Madoobe oo lagu magacaabo Korneyl Caga dhiig.
Korneyl Cagadhiig wuxuu ahaa Sarkaal muhiima oo gacan weyn ka geystay dagaalkii lagu jibiyay Maleeshiyadda Al-Shabaab lala galay.
Maleeshiyadda Cawra male waxay baabuur dagaal ka qabsadeen maleeshiyadda Ahmed Madoobe.
Cawra male maaha qabiil kaftama ama si dhib yar looga guuleeysto hadii ay dagaal u tafa xeytaan ,sida dadka jubooyinka ugu xog warameen Waagacusub.
Ahmed Madoobe oo ku sugan Nairobi ayaa amray in dagaalka la joojiyo laakiin sida muuqato hadalkiisu wuxuu ka dhigan yahay SAMBUUS AFUR DHAAFAY.
Ciidamadda Kenya ee ku sugan Kismayo ayaan wax dhaqdhaqaaqa sameen ilaa hada,waxaana muuqato inuu dagaalka sii xoogeeystay.
Xeeldheerayaasha dagaalku waxay aaminsan yihiin in Maleeshiyadda Ahmed Madoobe looga awood badan yahay Kismaayo maadama ay yihiin kuwa soo jeeda NFD iyo Kililka 5-aad